Free fanompoana an-tserasera. Kajy ny simenitra
Ny kajy ny habetsaky ny simenitra, fasika sy vatokely ny fanaovana simenitra
Habetsaky ny simenitra E
Kitapom ny simenitra isaky ny 1 metatra toratelo M
Ampahany amin'ny simenitra
simenitra : fasika : torotoro fo vato ny lanjan'ny
Ny vidin'ny fitaovam-panorenana
fasika (1 taonina)
torotoro fo vato (1 taonina)
momba ny kajy ny fitaovana ho an'ny simenitra
Mamaritra ny takiana arakaraka.
E - Ny ilaina habetsahan'ny simenitra. Voalaza ao amin'ny metatra toratelo.
M - Firy harona ny simenitra takiana amin'ny 1 metatra toratelo ny simenitra.
K - Ny vesatry ny iray kitapo simenitra. Amin'ny kilao.
Mamaritra ny lanjan'ny ny fitaovana ao amin'ny faritra misy anao.
Aza adino ny hanisa ny vidin'ny ankamaroan'ny fitaovana ao ny vidiny ny lanjan'ny fa tsy amin'ny boky.
Ampahany sy ny fanjifana ny simenitra, fasika sy vatokely ny fanaovana simenitra cube ny-mijotso dia ny boky, araka ny nampirisihin'ny tamin'ny mpanamboatra ny simenitra.
Toy izany koa ny vidin'ny simenitra, fasika, vatokely mety tsy hitovy be ao amin'ny faritra.
Ny firafitry ny vita mivaingana mifangaro dia miankina amin'ny haben'ny (fanafody rehetra azo avy) torotoro fo vato na vatokely, simenitra marika, ny freshness. Dia fantatra fa very ela fitahirizana simenitra ny fananana, ary amin'ny avo simenitra hamandoana tsara deteriorates haingana. Mariho fa tsy simenitra kitapo mandanja 50 kilao, araka ny voasoratra. Matokia fa manamarina. Ohatrinona ny simenitra no nampidina maso tsara kokoa.
Mariho fa ny vola lany ny fasika sy vatokely no voalaza ao amin'ny fandaharam-1 taonina. Nanambara ihany koa ny mpivarotra ny vidin'ny metatra toratelo isan-ny fasika, na torotoro fo vato, na vatokely.
Ny anjara ny fasika dia miankina amin'ny ny fiandohany, ohatra, renirano fasika dia manoatra noho ny asa.
Vatokely sy hotorotoroiny vato. Araka ny loharanom-baovao isan-karazany 1 metatra toratelo lanjan'ny manomboka amin'ny 1200 ny 2500 kilao arakaraka ny ampahany (habeny). Mavesatra - mihoatra noho ny tena.
Ka manisa ny vola lany isan-taonina ny fasika sy vatokely ny tenanao ianao. Na mamaritra ny mpivarotra.
Na izany aza, dia mbola manampy ny kajy hahalala ny vola vinavinaina ho fitaovana ho amin'ny fanomanana ny ilaina betsaka ny simenitra.